IICERAMIC IINTSIMBI NGABA ZINEW HOT WALL DECOR TREND YANGO-2020 - UHLOBO
Dibana neentsimbi zeCeramic: Impendulo ye2020 yoNyaka odlulileyo woLungiso lweNdonga yokuHlenga
Ndizizo zonke iindlela ezilula zokuphakamisa iindonga zam njengamntu olandelayo. Ukuprintwa, iiposta, kunye neefoto ezifakiweyo ngokuqinisekileyo bezikhona kum xa ndizifuna kakhulu. Kwaye ngasekupheleni konyaka ophelileyo, xa amalaphu alukiweyo eludongeni aphuma ekufihleni ukusukela kwiminyaka yoo-1970, ndandikhwele. Kodwa kukho umntwana omtsha kwibhloko, kwaye ndiluhlobo lokutyumza nzima-ndilinde-iintsimbi zeceramic.
Ngokuchanekileyo zivakala njani, ezi ntsimbi zixhomekeke ngaphakathi nangakumbi ngaphakathi. Ngazo zonke iintlobo zezitayile, imibala, kunye nobukhulu obufumanekayo kuluhlu lwamaxabiso, ungazongeza nakweliphi na igumbi ekhayeni lakho ukuze kube lula, isisombululo se-chic kwiindonga ezingenanto. Ngapha koko, banokuba nobumoya obunobuqili kunye noxolo oluzolileyo kubo, ukuba ungena kwezi ntlobo ze-vibes. Fumana ukhuthazo lolunye lwezinto esizithandayo esizisebenzisayo yodongwe iintsimbi emva koko ukhangela ezikhethiweyo zethu zokuthenga ukuze ufumane ukuzixhoma.
Ityala: UTessa Neustadt
Umyili UEmily Henderson wayefuna ukucoceka, ukujonga okungaqhelekanga eCalifornia kwigumbi lakhe lokugqibela lokuhlala, ke wasebenzisa iitrili zentsimbi enepatheni enepatheni elula ukongeza umdla eludongeni ngaphandle kokuyigcwalisa ngokuhombisa. Lo mmandla unokuba mncinci kakhulu kwisiqwenga sobugcisa, kodwa iintsimbi zeceramic zibukhulu obugqibeleleyo. Bazibamba ngokwabo ngokubonakalayo ngaphandle kokuba ubume obubonakalayo kwindawo yomlilo ekugxilwe kuyo kwindawo yasekunene.
Ityala: USara Tramp
Enye into entle malunga neentsimbi: Azikhawulelwanga kwisizini enye. Xa uDisemba ejikeleza kwikhaya lakhe elitsha, Henderson waxhoma iintsimbi zakhe ngaphezulu kwepiyano yakhe egreyishwe ngombala ukongeza kobuqili kule vignette yeholide. Ngokwenyani unokufumana okuninzi Iintsimbi ezijonga iKrisimesi , ukuba ufuna ukuzama lo mkhwa njengenxalenye yokuhombisa iholide yakho.
Ityala: UKaitrin Degan
Blogger kunye nomyili UKaitrin Degan yongeze i-bohemian vibes ethambileyo kweli gumbi linamava embindini wenkulungwane ngenkulungwane yentsimbi emhlophe ngaphezulu kwesitulo. Kukuchukumisa okulula, kodwa kunefuthe elikhulu.
Ityala: UBrittany Hebert Boothby
Iintsimbi ezimbini ezinkulu ezineepateni zejiyometri zinegalelo kubuhle obuncinci be-bohemian koku egumbini lokuhlala ukusuka kumyili UBrittany Hebert Boothby ’s I-Instagram. Izikhonkwane ezomeleleyo zenziwe ngomthi zibambe iintsimbi, ezithi zibe Iiceramics ezingama-2232 , kubude obude.
Ukubona inani u-1111
Ityala: Ngobubele beKismet House
Iintsimbi ezintathu ezimhlophe kunye nezintsundu ngokobukhulu obahlukeneyo ziyaxhoma nakwizikhonkwane zomthi kuyilo Igumbi lokuhlala lendalo likaErin Conway . Iintsimbi zeetan zitshintsha zonke iithoni zegumbi eziphilayo zomthi, ngoko ke zingena ngokugqibeleleyo.
kuthetha ukuthini ukubona i-111
Ityala: umaggie wam
Kwaye ukuba ufuna ukhetho lwe-DIY, ungenza iintsimbi zakho kunye neeplasta ze-terracotta, njengeblogger umaggie wam uyenzile. Thetha malunga nexabiso eliphantsi, elonwabisayo! Ufumene aba baxhasi beepatheni kwindawo ekujoliswe kuyo yedola, kodwa ngokuqinisekileyo unokuphinda uyiphinde le projekthi ngabalimi beeterracotta kunye nepeyinti ethile.
Ityala: Lisa Jackson / Kulungile kwiPhepha
Ukuza kuthi ga ngoku sele sizibonile iintsimbi zisetyenziswa zodwa, kodwa zinokusebenza kwilungiselelo lodonga olukhulu lwegalari. Inkqubo ye- indibaniselwano yeentsimbi ezinesibindi kunye nobugcisa obunemibala ngaphezulu kunika udonga e Kusasa , ivenkile yokuhombisa eCarlifonia, eclectic, eqokelelweyo.
Ukuba uqinisekile ngeentsimbi zeceramic zinokuba nendawo yokuhombisa ekhaya kwaye ngoku ufuna enye yendawo yakho, qala ukhangelo lwakho apha:
Ityala: Ubugcisa beCP Clay
I-CP Clay Art yodongwe yentsimbi
Ezi iintsimbi ezenziwe ngesandla yongeza ukuchukumisa ubuqu kulo naliphi na igumbi. Khetha kwimibala emine kunye neepateni ezintathu zokuhombisa udonga eziya kuthi zihambelane ngokupheleleyo nesitayile sakho kunye nendawo.
Thenga: I-CP Clay Art yodongwe yentsimbi , $ 46 kwi-Etsy
I-MQuan yesiqhelo yeNkwenkwezi ejulelwe iBell Round
Umzobi uMichele Quan ka Mquan kudala esenza iintsimbi zeceramic, kwaye uyilo lwakhe olumangalisayo ngokuqinisekileyo lukhethekile-kwaye luyabiza. Yintoni enokuba ngcono kunokuba intsimbi eyenziwe ngesandla Zipeyintwe ngophawu lwakho lweenkwenkwezi?
Thenga: Isiko leNkwenkwezi elijikijelwe ngeBell Round Ukuqala nge- $ 345 kwi- MQuan Studio
UKatherine Moes Desert eyomileyo iBell Bell
ICeramicist uKatherine Moes wenza ezi zinto zimnandi iintsimbi ngodongwe, ubuhlalu bodongwe, kunye newele. Iqoqo lezinto ezigqityiweyo ezahlukeneyo ziya kuba yindlela elungileyo yokugcwalisa indawo engenanto ngaphezulu kwebhodi yentloko kwigumbi lokulala elithuleyo.
Thenga: UKatherine Moes Desert eyomileyo iBell Bell , $ 40 nganye kwi-Morningtide
Ithagethi yentsimbi eyiTechware
Ndihlala ndihlala phantsi ukufumana okuhle ekujoliswe kuko, kwaye oku iseti yeentsimbi zodongwe ngemivumbo emnyama yenye yezintandokazi zam. Uyilo lwabo olulula luya kujongeka lukhulu nakweliphi na igumbi.
Thenga: I-3-Pack yamatye eChime Wind Chimes , $ 16.99 / 3-Pakisha kwiThagethi
Ithetha ntoni i-1010 ngokwasemoyeni
Ityala: Intliziyo enodaka
Iintsimbi zeCeramic zentsimbi enodaka
Ezi zibanzi zijikeleze iintsimbi yiza ngemibala eyahlukeneyo eya kuthi inike ikhaya lakho indalo, umhlaba.
Thenga: Iintsimbi zeCeramic zentsimbi enodaka , $ 70 kwi-Etsy
Ityala: L kunye neM Studio
L kunye neM Studio enkulu ye-Porcelain Bell
Yongeza ukukhanya kancinci eludongeni ngale porcelain emhlophe iintsimbi ifakwe kwi-glaze ecacileyo. Baza kukhazimla ngaphandle kokongeza naye ukubling kakhulu kwindawo yakho.
Thenga: L kunye neM Studio enkulu ye-Porcelain Bell , $ 105 kwi-Etsy
Iintsimbi zeTyware ngeentsimbi zeenkuni
Zama le seti yamatye iintsimbi ukugcwalisa udonga olungenanto kwindawo elandelayo emnyango okanye kumabonwakude.
Thenga: I-Co-op ye-Coware ye-Co-op yeentsimbi ezinobunzima beentsimbi I $ 29.99 kwiAmazon / iseti ye2
Uphawu olufihliweyo lweAmazon lukuvumela ukuba wenze uhlahlo-lwabiwo mali ngokulula
Iingcebiso zokuhambisa ifanitshala eGreyhound
I-23 yeeNdawo eziPhambili zokuFumana iiNgcebiso ngalo lonke ixesha
Ithetha ntoni i-1122
athetha ntoni amanani u-11 11
lithetha ntoni u-4: 44
Inombolo ye-444 yothando
ngu-999 inani leengelosi